MX Linux: Akụkọ kacha ọhụrụ maka ọnwa nke ọnwa Febụwarị 2020 | Site na Linux
N'iji ihe ndi ozo eme ihe, ihe omuma ndi ozo, nke amaraworị ma jiri ya Distro MX Linux, dị ka mwepụta ụbọchị ole na ole gara aga nke ya 19.1 mbipute, na ụdị ya "AHS", anyị ga-ekwu okwu banyere ndị ọzọ mere na ọnwa nke ọnwa nke February 2020.
Linux MX, maka ndị na-amachaghị banyere ya, bụ a GNU / Linux Distro mepụtara site na nkwado nkwado n'etiti obodo ndị dị ugbu a Distros "antiX" na nke mbu "MEPIS". N'ihi na, a Oge a, ọkụ, ike na enyi na enyi.
Oge ikpeazụ na blọọgụ, ebe anyị kwuru maka ya ugbu a version (19 - jọrọ njọ Duckling), ọ bụ mgbe m banyere beta tupu na mgbe a tọhapụrụ ya dịka ọkwa version kwụsiri. N'ihi nke a, anyị na-atụ aro ka ndị nwere mmasị gụọ akwụkwọ ndị a gara aga iji mie omimi karịa banyere ya.
Agbanyeghị, ọ bara uru arịba ama na ugbu a version (19 - jọrọ njọ Duckling) nke na-esote:
"MX Linux pụtara ìhè n'etiti ọtụtụ, n'ihi na obodo ndị a enyela aka na ngwa ọrụ ha kachasị mma un GNU / Linux nkesa ìhè ma siri ike, e mere n'okpuru echiche nke inye a desktọọpụ mara mma ma rụọ ọrụ nke ọma na ntọala dị mfe, nkwụsi ike dị elu na arụmọrụ siri ike. Ihe a niile na onyonyo onyoonyo ISO pere mpe maka nbudata, ojiji na nkenye dị mfe.". Previous Post: MX Linux 19: Emeputara ụdị ohuru nke dabeere na DEBIAN 10
0.1 Akụkọ kacha ọhụrụ na February-2020 maka MX Linux 19 - Duckling jọgburu onwe ya
0.2 VirtualBox emelitere na mbipute 6.1.2 - 5 / Feb.
0.3 Mgbanwe na ụlọ ọrụ gọọmentị - 10 / Feb.
0.4 Fluxbox Ngwakọta Nhazi Nhazi - Feb 15
0.5 Mwepụta nke ụdị ọhụrụ MX Linux 19.1 - 15 / Feb.
Akụkọ kacha ọhụrụ na February-2020 maka MX Linux 19 - Duckling jọgburu onwe ya
VirtualBox emelitere na mbipute 6.1.2 - 5 / Feb.
Emere mmelite a n'ihi na, na n'ihota okwu onye ọrụ nchịkọta ngwugwu ngwugwu ya:
"Enweela ọtụtụ ndozi ahụhụ na ndozi kemgbe ụdị nke ugbu a, na ụdị nke ugbu a agaghị ewu modulu ya na ụdị ọhụrụ 5.4 + nke kernels ka mmelite a dị mkpa".
Na-eme nkwanye na mbụ ma ọ bụ "ezigbo omume" nke mgbe ị na-eme otu ihe ahụ, ihe niile Virtual Machines (VM) "echekwara" ma ọ bụ "kwụsịtụrụ" nke Virtualbox ga-apụ tupu itinye mmelite ahụ, ma ọ bụghị ya enwere ihe egwu Ha nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ mgbe emesịrị.
Mgbanwe na ụlọ ọrụ gọọmentị - 10 / Feb.
Emejuputara mmelite a n'okpuru arụmụka nke:
"Ihe kpatara ya bu ikwe ka mgbanwe di omimi karie ma antiX na MX iji mepee uzo di iche iche nke ngwugwu ahu n’enyeghi aka. Njikọ dị n’etiti antiX na MX agbanwebeghị n’ụzọ ọ bụla".
Kpọmkwem, mgbanwe ahụ na-ezo aka n'eziokwu ahụ Ebe nchekwa Antix ahazi na faịlụ ahụ "/Etc/apt/sources.list.d/antix.list" ha ga-nkwarụ (wepụrụ) na ndabara. Kọwapụta na ọ nweghị nke a ga - anọchi anya mkpochapụ ngwugwu ọ bụla, ebe ọ bụ na ndị niile dị adị ga - akwaga ma ọ bụ tinye aka n'ime Ebe nchekwa MX-Linux (/etc/apt/sources.list.d/mx.list).
Fluxbox Ngwakọta Nhazi Nhazi - Feb 15
Mgbanwe ma ọ bụ mmelite emere na nhazi akpọrọ MX-igbe igbe 2.0 gụnyere ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ:
Mmekọrịta zuru ezu na Usoro Usoro, na-enye ohere ka otu pịa iji nweta ngalaba MX Ngwaọrụ ma nweta menu zuru ezu nke Xfce4.
Mmeba nke ihe ngwaike eserese eserese, n'ihi ụkọ ego achọrọ.
Okike nke n'ọdụ ụgbọ mmiri na ndị na-ebugharị nke wmalauncher kwadoro.
Nkwado maka isiokwu GTK 2 (ntụgharị).
Na-ekwusi ike na mmelite ahụ kwuru, MX-igbe igbe 2.0, esonyelarị na etinyere na ISO de MX-19.1.
Mwepụta nke ụdị ọhụrụ MX Linux 19.1 - 15 / Feb.
Enwere ike mejuputa mmelite a site na nwelite mmelite dị mfe site na njikwa site na iwu ma ọ bụ site na ngwa ọrụ eserese maka imelite nchịkọta. Linux MX.
N'okwu nke ndị kere ya, ọ bụ:
"Mmelite na nsụgharị MX-19 anyị, nke gụnyere ndozi ahụhụ na mmelite ngwa ahụ kemgbe izipụtara MX-19 mbụ anyị. Ọ bụrụ na ị na-agbazi MX-19, ọ dịghị mkpa ịtinye ọzọ. Nchịkọta niile dị site na ọwa mmelite oge niile".
Otu n'ime mmelite kachasị mkpa, ọ pụtara na ugbu a enwere ngalaba ọhụrụ akpọrọ AHS nke na-abịa site na mkpirisi ahịrịokwu na Bekee "Advanced Hardware Nkwado" nke sụgharịrị gaa na Spanish, dị ka «Advanced Hardware Nkwado». Otu, bụ naanị maka 64 ibe n'ibe, na ihe ndị ọzọ gụnyere ohere nke imelite ka a Debian 5.4 kernel, Isiokwu 19.2 Ọbá akwụkwọ eserese, yana nke kacha ọhụrụ maka ya Sava X.
Mmelite a na-ahazigharị nnabata nke MX-Linux (/etc/apt/sources.list.d/mx.list) dị ka ndị a:
Thehapụ uche nke onye ọrụ, nwee Ebe nchekwa AHS ma mejuputa mmelite ndị ahụ, site na ọnụ ma ọ bụ nke eserese. Maka ụbọchị, site na mbipụta nke post a, ọ na-enye m ohere ịwụnye ma melite nchịkọta ndị a, n'onwe m MX Linux 19 eji:
Nchịkọta ọhụrụ iji wụnye:
Nchịkọta dị ugbu a iji kwalite:
Enwere ike ịgbasa ozi ndị a na ozi ndị ọzọ na-abịanụ na Distro MX Linux blog.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere akụkọ kachasị ọhụrụ site na Distro «MX Linux» n'oge ọnwa nke «Febrero de 2020», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » MX Linux: Akụkọ kacha ọhụrụ maka ọnwa nke ọnwa Febụwarị 2020
Google eweputala ụdị Preview nke gam akporo 11 ma ndị a bụ akụkọ ya